आहार शुद्धि–२ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ फाल्गुन १६, आईतवार ०९:३४ गते
आहार त गर्नैपर्छ, यसको शुद्धि कसरी होस् ? आँखाले देख्छ नै; कम ज्यादा देख्ला, तर देख्छ नै ।
अतः त्यही हेर्नु, जुन हेर्न योग्य छ, सुन्दर छ, प्रीतिकर छ, आल्हादित गर्छ ।
तर मान्छेहरु गलत चिजहरु हेर्छन् । यदि बाटोमा दुई व्यक्ति कुश्तम् कुस्ती गरिरहेछन्, दंगाफसाद गरिरहेछन्, वाह गुरुजीको फतेह भनिरहेछन् भने भीड जम्मा भइहाल्छ । सित्तैमा तमासा कसले नहेरोस् । सर्कस भइरहेछ । लाख काम छाडेर मान्छे त्यहीँ उभिन्छन् । पहिला यो मजा हेरम, अनि काम गरौँला । कोही यो सोच्दैनन् कि जब तिमी दुई मानिसहरु लड्दै गरेको हे¥छौ तब तिमी हिंसाको आहार गरिरहेछौँ । तिमी आफूभित्र गाली लिएर जाँदैछौ । ती दुई मानिस गाली फलाकिरहेछन्, अभद्र व्यवहार गरिरहेछन्, अशोभनीय शब्द बोलिरहेछन् ।
जब दुई पुरुष लड्छन् हैरानीको कुरा त यो छ ः लड्छन् पुरुष, तर गालीचाहिँ स्त्रीहरुलाई दिन्छन् । उसले उसको आमालाई ठीक गर्छ, ऊ उसको दिदी–बहिनीलाई ठीक गर्छ । यो पनि सोचनीय कुरा हो कि, यो समाज कुरा त स्त्री समादरको गर्छ, यही हो त समादर । कुरा त यस्तो गरिन्छ कि जहाँ–जहाँ नारीको पूजा हुन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ देवता रमण गर्दछन् । तर, स्त्रीको पूजाको नाममा के भइरहेछ ? युगौँदेखि के भइरहेछ ? सिवाय अपमान र अनादरको अरु केही पनि हैन । यदि दुई व्यक्ति लडिरहेछौ त, एक–अर्कासँग सिध्याउ, यसमा स्त्रीहरुलाई बीचमा ल्याउने जरुरत के छ ? यसमा कसैको आमाले तिम्रो के बिगारेको छिन्; कसैको श्रीमतीले, कसैको छोरीले तिम्रो के बिगारेको छ ? तर गाली त स्त्रीलाई नै दिन्छन् । जो लडे नि अपमान स्त्रीकै गर्छन् । अनि तिमी उभिएर यसरी पिउँछौ, मानौँ अमृत पाएका छौ ।
जहाँ झगडा भइरहेछ त्यहाँ के तिमी सोच्छौ कि कुनै मान्छे झुपू–झुपू होला, निदाउला ? कहिल्यै हँुदैन । धर्म सभामा मान्छेहरु निदाउँछन्, शास्त्र सुन्दा निद्रा आउँछ । माला जप्दा झुपू झुपू हुन्छन् । तर दुई व्यक्ति गाली दि रहेछन् भने सुतेकाहरुको त कुरा छाडौँ, मुर्दाहरुलाई नि यदि थाहा भए उठेर उभिएलान् । यसो हेरौँ, अनि सुतौँला चिहानमा, यति हतार नै के छ ? जाँदाजाँदै यो मजा नि लिउँ । तर तिमी आहार गरिरहेछौ र ती गालीहरु तिम्रो दर्पणमा आच्छादित भइरहेछ ।
सुन्छौ के तिमी ? मान्छेहरु फिल्मी गानाहरु सुनिरहेछन्, व्यर्थको गफहरु सुनिरहेछन् । एकअर्काको निन्दा सुनिरहेछन्–झुठो । तर पनि कोही सन्देह गर्दैनन् । यस्तो मान्छे खोज्न मुस्किल छ, जोसँग तिमी कसैको निन्दा गर र उसले प्रश्न उठाओस् । हो, प्रशंसा ग¥यो भने हर एकले शंका उठाउँछ । भन कसैलाई कि फलानो मान्छे बडो साधु चरित्र । अर्को मान्छे तत्क्षण बोल्नेछ, “छोड, कस्तो कुरामा लागेका हौ । अरे, यो कलीयुग हो । साधु भए सत्युगमा, अब हुँदैनन्, सबै पाखण्डी हुन् । सबै धोकेबाज हुन् । सबै लुट्नमा लागेका छन् । अरे, हर ढोलमा पोल छ ।” हजार कुरा भन्ने छ, त्यो मान्छे । तिमीले सिर्फ फलानो मान्छे साधु हो भन्ने भूल गरेका थियौ । एक भन्दा एक कुरा उ निकाल्नेछ र कुराबाट कुरा निकाल्नेछ । र तिमी कुनै मान्छेको निन्दा गर, कोइ अस्वीकार गर्दैन । गर्मीले थकित प्यासा मान्छेले जल पिए झैं पिउनेछ । अस्वीकार नगरी पिउनेछ । कहिले भन्दैन कि भाई यस्तो निन्दामा मलाई भरोशा आउंदैन, त्यो मान्छे यति खराब हुन सक्दैन ।
कसैको प्रशंसा गर र तिमी तत्क्षण पाउनेछौ कोइ तिम्रो कुरा मान्न राजी छैनन् । मानिसहरु प्रमाण माग्दछन् । र कसैको निन्दा गर र तत्क्षण–तत्क्षण मान्छेहरु अंगिकार गर्न राजी हुन्छन् ः न कोही प्रमाण माग्दछ, न कोइ अस्विकार गर्छ । यो हाम्रो आहार को ढंग हो ।
अशुद्धको त हामी आहार गरिहाल्छौँ र शुद्धलाई हामी अस्वीकार गर्दछौँ ।
युगौँयुगसम्म सन्देह जारी रहन्छ । आज पनि मान्छेहरुलाई महावीर र बुद्ध जस्ता मान्छे साँच्चै नै भए भन्ने भरोसा छैन । इतिहासकारहरु खोजमा लागिरहेका हुन्छन्, यो सिद्ध गर्न कि यस्ता मान्छे कसरी हुन सक्दछन् ? कल्पना हो, पुराणकथाहरु हुन्, किंवदन्तीहरु हुन् । तर कोही शंका गर्दैन सिकन्दरमाथि, कोही शंका गर्दैन नादिरशाहमाथि, चंगेजÞ खानमाथि, तैमुरलंगमाथि । हत्याराहरुमाथि कोही शंका गर्दैन । जिससमाथि शंका हुन्छ तर जुदासमाथि केही शंका हुँदैन । राममाथि सायद तिमीलाई शंका होला तर रावणमाथि कुनै शंका हुँदैन । यो त रावणलाई पत्याउनको लागि तिमीले रामलाई पत्याउनु परेको छ, पत्याउन त तिमी रावणलाई नै पत्याउछौ । तर रावण एक्लैलाई कसरी मान्नु ? रामको पृष्ठभूमिबिना रावणलाई मान्न मुस्किल हुन्छ । त्यसैले निमित्त मात्र रामलाई पनि स्वीकार गर्दछौ । तर ध्यान रहोस्, यदि काँडा चुन्छौ, काँडाहरु नै जम्मा हुनेछ – अनि गडनेछन् पनि । यति गडनेछन्, यति पीडा दिनेछन्, यति घाउले भरिदिनेछन्, यति पाक्नेछ घाउ, गहिरिने छ कि फूल पाइहाले पनि भरोसा आउँदैन । फूलहरुमा भरोसा गर । फूलहरुलाई भित्र लैजाऊ । फूलहरुले आफ्नो प्राणलाई आच्छादित गर– यतिसम्म कि यदि काँडा भेटिए पनि फूलले आच्छादित आत्मा अप्रभावित रहोस् । तर मान्छेहरु अचम्मका छन् ।
म मुल्ला नसरुद्दिनको घरमा बसिरहेको थिएँ । उसको छोरा फजलु आयो, मुल्लाले दायाँ–बायाँ केही नहेरी उसलाई पिट्न थाल्यो । चार–छ झापड बेस्करी लगायो । मैले सोधेँ कि, म हेरिरहेछु उसले कुनै गल्ती गरेको छैन, एक शब्द बोलेको छैन, तिमी उसलाई किन पिट्दैछौ ?
मुल्ला नसरुद्दिन भन्न थाल्यो, “यसको गल्तीको लागि कसले पिटिरहेको छ र ? दुई दिनपछि यसको परीक्षाफल निक्लदैछ र आजै मलाई बाहिर निक्लनुछ ।” ऊ अहिलेदेखि नै बन्दोबस्त गर्दै थियो ।
अचम्मका मान्छेहरु छन् । तर यस्तै मान्छेहरुले दुनियाँ भरिएका छन् । तिमीले पनि आपूmभित्र खोज्यौ भने यस्तै मान्छे लुकेको भेट्नेछौ । किनकि सीधै देख्न सक्यौ भने उसलाई बच्न गाह्रो हुन्छ ।
आहार शुद्धिको अर्थ हो : आफ्नोभित्र त्यही लिएर जानु जुन प्रीतिकर छ, सुमधुर छ, सुन्दर छ, सत्य छ, ता कि तिम्रोभित्रको स्वरुपमा शृंगार आओस्, यौवन आवोस्, ता कि तिम्रोभित्रको स्वरूप निखारिओस्, प्रकट होस्, उभारिओस्, फोहोर नजमोस् ।
क्रान्ति सुत्र : साक्षी भाव